Rahoviana Ny Zaratany Mizakatena No Tsy Mizakatena? Rehefa Miteny Izany Ny Fampahalalam-Baovaom-Panjakana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2016 17:53 GMT
Oblast mizakatena Gorno-Badakhshan (GBAO) voamarika mena. Sisintanin'i Tajikistan amin'i Afghanistan ao atsimo, Shina ao atsinanana, Kyrgyzstan ao avaratra ary Uzbekistan ao andrefana. Sary Wikipedia.
Tao anatin'ny volana maromaro izay ny fampitam-baovaom-panjakana Sovietika taloha ao Tajikistan no nitsahatra tamin'ny fiantsoana ny Faritra Mizakatenan'i Gorno-Badakhshan (GBAO) ho mizakatena, fironana izany niteraka firehetam-pahatezerana teo amin'ireo vondrona vitsy an'isa masiaka amin'ny fahaleovantenany monina amin'ity fizaran-tany saro-pehezina ity.
GBAO — voafaritra ara-tsorikisarin-tany amin'ny tandavan-tendrombohitra Pamir ary ara-kolontsaina avy amin'ny Ismaelita Pamiri izay mandrafitra ny maro an'isa amin'ny mponina mihoatra ny 200.000 ao aminy — dia niforona voalohany araka ny didy hitsivolan'ny Komity Mpanatanteraka Foiben'ny Firaisana Sôvietika tamin'ny 2 Janoary 1925.
Nitazona ny fizakantenany io faritra io nandritra ny vanim-potoanan'ny Firaisambe Sôvietika sy mandra-pahaleovantenan'ny fanjakana Aziatika Afovoany, eny fa na dia taorian'ny ady an-trano dimy taona izay nahitana ny maro tamin'ny mponina niady tamin'ny governemanta fa nanatevin-daharana ny Fanoherana Tajik Tafaray (UTO) aza.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy anefa izay dia nasehon'ny governemanta foibe miorina ao Dushanbe ny tsy fahazakany ny maha-hafa ity faritra voatonontonona ity.
Tsy hita amin'ny fanombanana ny toetrandro ao amin'ny fahitalavitra ny fizakantena
Tao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahaleovantena, nahatratra ny tampony ny fifanenjanana teo amin'ny faritra sy ny fitondrana tamin'ny 2012, raha nisy manampahefanan'ny fiarovana ambony iray akaikin'ny fitondrana maty novonoin'ny manampahefana hafa ao amin'ny governemanta izay nanam-pifandraisana tamin'ilay antoko UTO efa nofoanana.
Fanehoan-kery tsy mifandanja amin'ny tokony ho izy no nasetrin'ny governemanta Tajik izany.
Raha mbola mifanditra tamin'izay “nandresy” tamin'ny fifanandrinana niteraka fahafatesana olona am-polony maro teo amin'ny vondro-tafiky ny governemanta sy ny mponina ao an-toerana ny olona, ny azo itokisana dia marefo dia marefo, raha tsara indrindra, ny fifehezan'ny governemanta ny faritra.
Tamin'ny 19 Febroary, Ato Mirhodzha, poeta sady filoha lefitry ny Vondron'ny Mpanoratr'i Tajikistan nandefa taratasy tao amin'ny Facebook tamin'i Mahmadsaid Pirzoda, Filohan'ny Komitim-panjakana misahana ny fahitalavitra sy ny onjampeo manohitra ny fanondroan'ny fampitam-baovaom-panjakana an'i GBAO ho ‘faritanin'i Badakhshsan’ fotsiny ihany.
Nifandirany fa izao tsy fifankahazoana izao dia “mety hitarika mankany amin'ny tsy fifankahazoana eo amin'ny samy Badakhshsanis, ary lasa antony hitomboan'ny fifandroritana.”
“Na ny Filohan'ny Radio sy ny Televiziona, na olonkafa dia tsy misy manan-jò tsy hiraharaha ny Lalampanorenan'i Tajikistan, izay ahitana ao anatiny araka ny fomba ofisialy ny ‘Faritra Mizakatenan'i Gorno-Badakhshan’,” hoy i Ato Mirhodzha tamin'ny servisy amin'ny teny Tajik an'i RFE/RL, nitaraina fa ireo mpamantatra ny toetrandro sy ireo mpamky ny vaovao indrindra indrindra no tena milaza io zaratany io hatrany tsy ahitana ny fanondroana azy ho ‘mizakatena’.
Efa niala aloha ny tahotra isian'ny referendum…
Namaly tamim-pihetseham-po an'izany fironana vaovao izany, tao amin'ny tambajotra sosialy ny mponin'i GBAO, ary maro no matahotra fa mety ho ahiana amin'ny fitsapakevi-bahoaka ara-lalampanorenena hoavy io ny ny satan'ny zaratany.
Ramzess Shogunov, teratany Badakhshan nanainga flashmob [hetsika kintana] iray tamin'ny Facebook, ka tamin'izany no niantsoany ny amin'ny hanohizana ny fizakantenan'i Badakhshan.
Ry namana, misy ny hevira fa hotontosaina amin'ny volana marsa amin'ity taona ity ny fitsapakevi-bahoaka amin'ny hanafoanana ny sata mizakatenan'i Badakhshan. Ho fampifandraisana amin'izany dia miantso amin'ireo tsy miraharaha ny hoavin'ny tanindrazantsika izahay, sy ireo mitady ny FANDRIAMPAHALEMANA ato Tajikistan […] hanova ny sary firakofany amin'ity sary manaraka ity, satria miantraika mivantana amin'ny hoavin'i Tajikistan iray manontolo izy ity.
Anjatony ireo nanasonia ny fisantaran'andraikitra ampiasana manontolo ny anarana GBAO amin'ny sary firakofana, na dia tondroin'ny sasany aza ny mahazava-poana ny fiezahan'ny governemanta foibe hanana fifehezana saimbolika amin'ny faritra mitokana sady lavitra ara-jeografika:
Tazony ny fitoniana !!!!
Zarataninay ity. Zaratanin'ny Pamirs. Efa namidin-dry zareo [tamin'i Shina mpifanolo-bodirindrina tsy nanaovana fampilazana taminny mponina tao ifotony ny atsasaky ny zaratany. Mahafantatra [ny governemanta] fa tia filaminana izahay ka izany ny anaovany izao. Inona no hitranga aorian'ny fitsapa-kevibahoaka? Tsy i [Rakhmon] no nanome anay ny fizakantena ka tsy manan-jo hanaisotra izany aminay izy. Niezaka ry zareo hampandohalika an'i Badakhshan ho eo anatrehany tamin'ny 2012, saingy tsy nahavita.
Azo heverina kokoa fa tsy hita ao amin'ny tolo-dalàm-panitsiana ny lalampanorenana izay hanaovana fandrotsaham-bato amin'ny volana mey ny momba ny satan'ny GBAO.
Ireo fanitsiana ireo dia mifandraika betsaka amin'ny oloben'i Tajikistan ny Filoha Emomali Rakhmon, izay ho ho afaka hifaninana hahazo ny birao tsy voafetra fehim-potoana azo iasana raha lany ny fitsapakevi-bahoaka, ary ho afa-mirotsaka handimby azy ny zanany lahy Rustam Emomali amin'ny fifidianana manaraka noho ny fiovana eo amin'ny fetran-taona farany ambany indrindra ho an'ireo ho kandidà filoham-pirenena.
Na izany aza, ny fifanenjanana misy amin'izao fotoana izao manodidina ny satan'ny faritra araka ny lalàna no nahitana fa anaran-toerana iray dia mety hisy lanjany lehibe any amin'ny faritra iray ao amin'ny firenena izay efa zatra ny miaro ny fahaleovantenany amin'ny fomba henjana.
Indrisy moa fa ny fivoaran-draharaha vao haingana iray no manaporofo fa tsy mbola naharay ny hafatra ny governemanta any Dushanbe:
Nanaiky ny hanolo ny anara-tanàna ambanivohitra iray ao GBAO ho Rahmonobod ny filoha Tajik Rahmon